Ukubuya leli wundlu 2016! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
One uNkulunkulu, One Earth, One Abantu.
IBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu ‘ « nokuthi yena wadala amazulu nomhlaba, umhlaba nabantu.
Ngokusho ikhalenda YesiHebheru siyobe kulo nyaka 2016, i-5777 thngonyaka ka ekudalweni kwesintu uNkulunkulu.
Yini ukuba bavume kuphambene zesayensi mbumbulu ubufakazi sokulandela esintwini engaphezu kweminyaka eyisigidi.
Kuwo wonke umlando, iBhayibheli wafundiswa amadoda ukugcina lokhu intambo inyunyana phakathi kukaNkulunkulu esintwini.
Maye, indoda esikhundleni ziyasondela kuNkulunkulu ngokubhapathizwa le mfundiso liye laqhubeka anyakaze.
Naphezu imfundiso yeBhayibheli, imibono eyiphutha abaningi baye kwavela phezu emlandweni wesintu. Kwakukhona akhulekela ilanga, inyanga kanye isipoki nonkulunkulukazi basekhaya imaginary. Amadoda aye ehamba ekhulekelwa njengalokhu onkulunkulu isibonelo koFaro.
Kodwa umuntu ezakha kakhulu ezweni lanamuhla kwaba nakakhulu begcina uNkulunkulu! Le ndoda uye umane bhunkula umdali yayo noma umuntu sibi kakhulu aze enze sengathi uNkulunkulu akekho.
Ngakho uNkulunkulu engekho engqondweni yomuntu zanamuhla, indoda Waphupha lokuba unkulunkulu.
France naphezu uClovis noJoan of Arc, uye waqhubeka ukucasula uNkulunkulu kuwo wonke umlando walo (ukucekwa namaProthestani nhlangothi St. noBartolomewu, ukuzingelwa kwabathakathi, ukuboshwa kanye kusondele Templars noJeanne arc njll ..) kanye waseFrance agcine ekhululiwe uNkulunkulu ka isimo ngesikhathi 1789 revolution.
I Republic ubefuna ukushayela uNkulunkulu nokuphila France e 1789 futhi siyabona lapho ekugcineni kubangela.
iminyaka 227 kamuva, eFrance likhubekile, bahlasela futhi bawaphuca ifa lawo impahla yakhe by laba bahlaseli mbumbulu obunokuthula ngubani owamukelwa njengoba ephawulekayo, ekuzaleni, lungaphansi, wapha, lalinakekela mahhala baze bakhokhela nyangazonke izintela wethu!
Nokho French kungenzeka ukuthi uphile « in ubumpofu » naphezu umsebenzi ngokuvamile okubuhlungu imithwalo esindayo more ngesabelomali umndeni ubala, « usizi » lapho ehlaselwa elikhulu lokuntuleka kwemisebenzi.
Umhlalaphansi zingabantu best ziyingozi futhi neze usizi ngemuva ukuphila isikhathi eside esebenza ngokuvamile okubuhlungu kakhulu.
Abantu French basuke ukucwaswa futhi wagwetshelwa yokungavikeleki hlupheka kuzuze laba bahlaseli angaphandle ngazo baphoqeleka ohulumeni ukuba bahlale ndawonye.
Lokhu isethi bukhoma has a izindleko futhi kuba nabantu French abasisekelayo ebuhlungwini obukhulu « Intela, izintela, izimali kanye namashaji zihlale ezibaluleke ngokwengeziwe, kanti izinzuzo social wehlise kuze kube seqophelweni lokuthi abantu French babe enzima ukwelashwa.
Umongameli François Hollande has ngisho, okungenani encwadini yakhe ex-senkosikazi, edelelwa abantu bakhe ngokuhlukanisa nokuzitjho: « Lo nezisini ».
Le nkulumo okuyihlazo, okuyihlazo, ezilulazayo ayinhlamba nokho a reflection of ngokoqobo, ngoba kuyiqiniso ukuthi French abakwazi ukuphulukisa kahle.
Izindleko zokunakekelwa kwamazinyo futhi okufakelwa ngokuvamile kukhona ezimba kubantu abahlala eendaweni ezitlhagako nosizi, futhi empeleni ngokuvamile nezidalwa engenamazinyo.
By ngokumelene lezi zinqubo futhi okufakelwa bakhululekile ukuba zonke lezi abahlaseli!
We AmaKristu ayazi ukuthi nguye ukungabikho kaNkulunkulu empilweni waseFrance kwasiholela ekubeni lesi simo ezibhubhisayo.
Futhi ukusenza siqonde, uNkulunkulu wayefuna lezi ‘Abahlaseli « angaphandle kukhona enkolweni Lucifer » Islam. «
Njengoba sibona nsuku zonke siphila ezikhathini ekupheleni futhi iyophela kanye ukubuya kweNkosi yethu neNkosi uJesu Kristu.
Nginethemba elikhulu lokuthi le ukubuya ngenyanga ka September noma inyanga ka-Okthoba 2016
Kodwa kufanele siqaphele ukuthi ngenza iphutha kakade futhi angikwazi ngakususi ukuthi lesi sikhathi bengiyakuba okungalungile.
Maye, kungase kudingeke ulinde emashumini eminyaka ambalwa ukubuya kweNkosi.
Kodwa ngiyethemba hhayi ngoba ubuhlungu waqala (okusho elingenakuphikwa) futhi bakushaya nebandla elikhulu kusukela 29 September 2008.
Siyazi futhi ukuthi bayohlala isimo sibe sibi ngokuya ukubuyela enkazimulweni kaJesu Kristu selokhu abuyela kumelwe ngibe njengasezinsukwini izinhlungu zokubeletha.
Ngakho ubuhlungu iqhubekela phambili futhi kungaba kuphela isimo sibe sibi more!
Uma uJesu Kristu ube esephinde kulo nyaka 2016, maduzane nje sizothula ebugqilini zonke lezi izinhlungu zokuphila. Ngakho-ke kubalulekile ukuba sihlale noNkulunkulu ngomthandazo ecela intethelelo usuku nosuku ngenxa yezono zethu, amaphutha ethu, amaphutha ethu, izenzo zethu ezimbi nemicabango yethu ongahlanzekile.
Sine ezimpilweni zethu ziqokomisa nezindinganiso zethu zobuKristu ngokusiza bonke labo cela usizo kubandakanya laba bahlaseli.
Kodwa futhi kufanele ukuvikela isiko lethu, umlando wethu, amagugu ethu futhi izwe lethu eFrance.
Qaphela ukuthi ngithi neFrance sivumelekile for wonke amazwe eYurophu invaded sengathi izilimi zethu, izindaba zethu kanye namazwe ethu awafani, ukholo lwethu lobuKristu kuvamile.
I kufanele acacise ukuthi kuba nobuthakathaka kwabohulumende ikhuthaza bonke abantu ophumweni ezingakhuphuki nje atholwa eSiriya kodwa evela emhlabeni wonke ukufuna ukuphila okungcono eYurophu futhi ikakhulukazi eFrance.
Izinsuku zokugcina ngaphambi ukubuya kukaJesu Kristu uyoba kwencazelo eziqine lwesintu. Kufanele sithandaze kuJehova ngokuqinile konke kwenziwe kulo nyaka, 2016.
Lokhu kushiya isikhathi esincane kakhulu ukuletha abaningi izidalwa kuKristu ngokubhapathizelwa.
It is futhi mhlawumbe ngenxa yaleso ubhapathizo inikelwe kubo bonke abafuna ukuthuthela kwelinye izwe ukuthi uNkulunkulu wathumela kubo eYurophu. Ngakho ungangabazi ukuphakamisa ubhapathizo bonke abawucela usizo lwakho.
Cabanga ukuthi uma uNkulunkulu wayefuna ukuba, singase esikhundleni sawo wonke imindeni kwababaleki.
Hlala uthobekile futhi umbonge uNkulunkulu ngothando okusiletha naphezu izono zethu, amaphutha ethu, amaphutha ethu, izenzo zethu ezimbi nemicabango yethu ongahlanzekile.
Maye, uma uJesu Kristu uyaphuza ukuza futhi ukubuya kwakhe kamuva, ngakho kuzodingeka kuyinkinga enkulu 2017.
Lokhu kuyoba wokhetho lobumengameli eFrance ngamunye ngenxa kanembeza wakhe ngizoya ukuvotela ozobhapathizwa abalithandayo.
Kufanele nokho uqaphele ukuthi Republic shadow ngokwalo kanye nobukhosi bawo siqediwe futhi imali yayo.
Kuthiwa ithonya nethonya France emhlabeni périclitent ngokuya kusukela General de Gaulle.
Uma kungenziwa lutho ukuba kwamisa unomphela futhi ukuhlanekezela ayehlasela, eminyakeni ezayo kuyoba amancane ezinhlanga French AmaKristu Republic uma lisekhona kodwa ayisekho wokuziphilisa futhi Koranic lolu shintsho kuyoba wentando okhethweni.
Iziphathimandla ziye esenqatshelwe ukuba akhulume iqiniso ebantwini.Ngakho akukho izibalo ngokusemthethweni khona isibalo French kumaMuslim kodwa noma ubani angabona imizi ngemizi, kuzo zonke izindawo ukuthi imiphakathi Islamic kukhona nakakhulu eFrance Europe.
Ngo Ngokusobala, ukubaluleka kwale miphakathi liyamangalisa!
Ukusekela in okhethweni lezi zinqubomgomo abayekethisayo yokufuduka Islamic kuyoba asuke Ukholo, ubuKristu futhi uJesu Kristu.
IJaji, asilahle kwababaleki uyophinde asuke Ukholo, ubuKristu futhi uJesu Kristu.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi charity iqala nge ukuzithuthukisa omunye kumelwe ukuba ngumnikazi.
Ngakho kungakhathaliseki ukuthi izinqumo ezenziwa yizikhulu zethu abaqokelwe zonke lezi bahlaseli kwababaleki, kumelwe siqinisekise ukuthi izinqumo zisetshenziswa ngothando nothando lobuKristu.
Ngesikhathi lapho amadoda benqaba uNkulunkulu, kuhlanganise, ethi« abaphika » bakhatsatekile kabanzi mayelana nokuthi kwenzekani kwabanye njengebhaxa ikusasa labo siqu futhi isiphetho imiphefumulo yabo.
Ngakho-ke cishe ukuthi ngemuva kokhetho lobumengameli, kungakhathaliseki ukuthi izitatimende ukhetho nezithembiso, notshwala ezifudukayo qhubeka sikhule kakhulu eYurophu futhi ikakhulukazi eFrance.
Izimbangela efanayo njalo ukukhiqiza imiphumela efanayo, ukuthi Islamists ababesezweni eMpumalanga, bayokwenza kube eYurophu.
Ubudlova, impi yombango futhi impi yenkolo yalokho ngokuqinisekile usenze kwalezi ziphepho ababayo ngemuva kokhetho French kamongameli. Uma kungenjalo ngaphambi !!!
Ezweni lapho Pope ngokwakhe baphelelwa ukholo kuze ukuqaphela zonke izinkolo njengezindlela ezingafani weqiniso futhi njengoba ziyindlela eholela kuNkulunkulu, ngakho kuyaqondakala ukuthi abaningi abafowethu nodadewethu abagcina inshokutsi weqiniso ukholo ngokuya ubekelwa imingcele.
Kukhawulelwe futhi ziba inkululeko yethu. Ngokushesha ngokuqinisekile ngeke ibe nenkululeko sokulahla zonke izenzo ngokumelene ukholo lwethu lobuKristu, ngokumelene lamasonto ethu futhi ngokumelene udlame abafowethu nodadewethu eFrance kanye nalo lonke izwe.
Ngakho bafowethu kanye nodade abathandekayo, ngilibhalele izincwadi ezimbili emnyango wokuqala ngo isihloko igama blog. « Umshumayeli we Ukubuya iNkosi » futhi ezansi « Kusukela ubumnyama eza ukukhanya » Le ncwadi engxenyeni yokuqala uyakufakazela ukuba khona kukaNkulunkulu futhi kuchaza ukuthi kungani indalo yakhe eminingi umuntu futhi siyoba yini isiphetho salabo abakhetha ukulandela intando kaNkulunkulu. Ingxenye yesibili yale ncwadi iqukethe ezinye izihloko yami mina li kubhekwa njengento ebaluleke nokugcina Ukuvalwa kungenzeka blog entandweni yami.
Owesibili incwadi enesihloko ‘eFrance, Impucuko futhi Republic olwandle « futhi ogama isihlokwana kuyinto » The Umshumayeli Ukubuya iNkosi « kwachazwa engxenyeni yokuqala kanjani thina bakhohliseka futhi badumale line indaba fatidiquement ukuzithola ekupheleni kwesikhathi isigqila. Sihlathulula nokuthi France ungathola out yalesi kukhwelana, « ukubuya we King of France, » uma ukubuya kukaJesu Kristu kufanele kwenziwe emashumini eminyaka ambalwa.Ingxenye yesibili yale ncwadi iqukethe ezinye izihloko zami Ngiye li kubhekwa njengento ebaluleke ukusindisa Ukuvalwa kungenzeka blog entandweni yami.
Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, kubuye iNkosi yethu uJesu Kristu izizukulwane zethu, kuba ngokuqiniseka okuphelele! Futhi ingabe bhalisa cha jeza emthunzini kokungabaza!
Kodwa iBhayibheli lisitshela ukuthi lapho uJesu Kristu uzobuya inkolo yeqiniso iye cishe wanyamalala eMhlabeni.
Ngakho ngisho noma Ngiyaqiniseka yokusondela ukubuya kanye promptness weNkosi yethu uJesu Kristu ngonyaka 2016, iqiniso liwukuthi uma ngingafika khona akulungile nokuthi kokubili izincwadi ngokuqinisekile ukukusiza ngoba uNkulunkulu kuphela owaziyo ukuthi iyini izitha ziyakwazi Faith.
Siyabona futhi baphawula ukuthi kusukela ngo-2008 ubuKristu wehlela esihogweni. Abafowethu nodadewethu Kushone emhlabeni wonke ukunganaki jikelele we Izinduna zethu yeningi. Sithola ukuthi Islam zalwa namaKristu.
The September 27, 2015 Pope Francis uye wakuphika ngisho noJesu Kristu Cathedral St Patrick e-US, ilingana isiBopho olusemthethweniukufa kokuhlela kwebandla eliKatolika esenziwa uPapa Francis, ngubani ngoba vele wenqaba imfanelo umsebenzi sobupapa lapho emiswa March 13, 2013.
Sithola ukuthi Kudlula isikhathi esengeziwe, sizibona nakakhulu izici‘amaKristu « basuke ngamnyama wafaka enkantolo.
zinsuku zosizi kusengaphambili, ngakho nganquma ukuba abhale izincwadi ezimbili eziyosisiza ukuba balungiselele imihlangano neqondayo noma imfihlo banesibopho njengoba kwakwenza amaKristu okuqala noma ungakwazi ukushumayela ngisho uyaphinda futhi kuze kubuye iNkosi.
Nokho Enethemba, ukuthi lokhu akudingekile nokuthi lesi sikhathi kuhle futhi ukuthi uJesu Kristu emuva ngempela kulo nyaka 2016 ngenyanga ka September noma Okthoba, ngicabanga ngesikhathi umkhosi wamacilongo phakathi 03 no-Okthoba 4.
Ngachaza in the blog ngesonto lokugcina ekupheleni kweBhayibheli kwesikhathi, esibhalisiwe isikhathi esiyiminyaka eyisikhombisa kwakuprofethiwe umprofethi uDaniyeli eminyakeni engaba ngu-600 ngaphambi kokuqala kukaJesu Kristu.
Kule minyaka eyisikhombisa eyedlule ukuvala ekupheleni kwesikhathi, kuba isijeziso sikaNkulunkulu. It is kushiwo isiprofetho sikhathi esiyiminyaka eyisikhombisa siqukethe izikhathi ezimbili emithathu nengxenye nokuthi phakathi nekhulu lesibili iminyaka emithathu nengxenye, ubuhlungu kuyoba licace okuningi.
Njengoba ngamemezela esihlokweni yami ukubuya UJESU KRISTU kwangathi 14 noma engu-15 Septhemba 2015! Ngomkhosi wamacilongoukubuya kukaJesu Kristu kwakudingeka angenele ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa usizi, ekuqaleni I elise-29 September 2008 kulandela crash stock market of Wall Street ngoba amandla ukuze wazi ukuthi kusukela ngaleso sikhathi zonke izibonakaliso bamemezela neziprofetho ukubuya kukaJesu Kristu olwenzeka nge force bayanda nokubaluleka.
I ukubuya kweNkosi yethu kwadingeka ukuba angenele ukuze September noma Okthoba 2015. Nokho sonke yathola ukuthi kwakuyiphutha.Kodwa ubuhlungu kwakuwukuhlasela kwangempela lokhu futhi ezikhula kusukela 29 September 2008.
Iphutha Ngicabanga eyenziwe ngeke ikhumbula ukuthi lesi siprofetho akhuluma ngayo eminyakeni engu kabili emithathu nengxenye.
Ekugcineni ngaqonda ukuthi uma isiprofetho sathi iminyaka kabili emithathu nengxenye isikhathi efile phakathi ngezikhathi ezimbili zeminyaka emithathu nengxenye.
Leyo nkathi yaphela sokuqala ngoMashi 2012 isibonakaliso esikhulu emazulwini is ngeshwa wavele wangamnaka njengoba kwakunjalo omkhulu futhi okungalindelekile: Spanish ulimi video.
Ingxenye yesibili emithathu nengxenye iqala ngombono wami nokubekwa Pope Francis 13 Mashi 2013 futhi kuyacaca ukuthi ubuhlungu uzoqhubeka futhi isimo sibe sibi ngokuya kuzo zonke izindawo.
Emithathu nengxenye ngemva March 13, 2013 kusiletha September 13, 2016!
Ngakho, kumelwe sivume alinge. Uhlaziyo zonke izibonakaliso futhi iziprofetho okukhulunywa ngabo eBhayibhelini ukumemezela ukubuya kukaJesu Kristu wembula uhlu olude izenzakalo bazo zonke izinhlobo esiphila Emhlabeni basuke.
Izinhlekelele, ukuzamazama komhlaba, imililo, izikhukhula, iziphepho, izivunguvungu, Eksodusi, ubhadane lwezifo, indlala, ubudlova, izimpi namahemuhemu ezimpi, ubuphekula, ukulahlekelwa amagugu, ukufa ezingenakubalwa izinhlanzi, izinyoni nezilwane nemfuyo ngaphandle kwencazelo nsuku zonke ukuphila kulo mhlaba futhi esintwini. Lezi zenzakalo zaba waprofetha ukumemezela nokubuya kweNkosi neNkosi, uJesu Kristu uwukuphela kwendodana kaNkulunkulu ngiza ukubusa emhlabeni iminyaka eyinkulungwane ukuza kuze inhlekelele.
Yebo strange njengoba kungase kubonakale singabantwana mhlawumbe esezohlangana umdali wethu.
Ngifuna baqaphe futhi bathi mhlawumbe futhi bayavuma ukuthi ngingubani njengoba okwamanje mhlawumbe kanye ngephutha.
Angisiye umprofethi kakade futhi kanjalo Anginandodana namahloni ukuvuma kungaba okungalungile. Nokho, ukube uJesu Kristu wasishiya izimpawu ukusenza sibheke futhi ulinde ngenkathi kusinike amandla nethemba okudingeka izithathe ukuze ixazulule ubunzima ezihlobene ekupheleni kwesikhathi.
Yileso izindaba ezinhle ukubuya kweNkosi yethu.
Kodwa ungabona ukuthi uma kukhona izindaba ezinhle, kukhona izindaba ezimbi.
Izindaba yokuqala ezimbi wukuthi ezinyangeni ezizayo abazobe kakhulu nzima njengoba siphila sesiseduze kakhulu nokuphela usuku ukubuya kukaJesu Kristu, nokuthi izinsuku zokugcina kuyoba enzima. Bayoba nesikhathi ngosuku lwentukuthelo kaNkulunkulu.
Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ezinyangeni ezizayo sikukhuthalele kakhulu emthandazweni, ecela uxolo, ukuphenduka. Ngemva kungase kube kuhle kuthiwe sekwephuzile !!!
Owesibili Izindaba ezimbi wukuthi angazi uma ayobe wesonto kuyoba ngomzuzu wokugcina noma ngaphambi kwesikhathi ngosuku lwentukuthelo kaNkulunkulu.
Thandaza bazalwane bami kanye nodade abathandekayo ukuze kubuye iNkosi yethu uJesu Kristu akayena inenzuzo ilibele ngoba ubuhlungu kuyoba akubekezeleleki ngaphezulu intandokazi kwabaningi bethu.
Nokho singase naphezu ngokunemba ukuhlaziywa ngiholelwe ekubeni ukulinda iminyaka embalwa more ukubuya kweNkosi yethu futhi kusengaphambili ngiyaxolisa.
Izindlela kaJehova, futhi ngiye ngathola, ngokuvamile njengomuzi ongangeneki!
Uma kudingeka silindele emashumini eminyaka ambalwa kuyoba nzima kakhulu futhi mina nilalele iqiniso lokuthi amanga abalandeli sophikisana bakaKristu inkulu kakhulu kunangendlela zivela, mina bakumema ukuba ubuke le ividiyo kuleli khasi blog: » lapha « ukuze uthole umqondo ubukhulu bale amanga sikhuthazela for ubudala yobudala the Earth.
Bafowethu kanye nodade abathandekayo kuKristu Jesu ngiye ngaba bakumema ukuba oda ezincwadi zami ukuba Edilivre izinguqulo ezimbili.
UNkulunkulu anibusise uhlale ngakwesokunene nemihlanu endleleni nokuqotho yothando, ukuthula, ubulungiswa, uzwela nokuthobeka thina wazilandela ngokunembile uJesu Kristu kanye umkhondo nguye kuNkulunkulu.
Ukuze uthole ukuqonda kangcono ukuthi yini elilindele lwesintu, ngiyanicela ukuba ufunde isihloko esithi lami ukubuya kukaJesu Kristu ngenjongo yokuthethelelwa SEPTEMBER NOMA October 2016
The umkhosi wamaJuda amacilongo ozoba ngomhlaka 03 no-Okthoba 4, 2016 kufanele kusimangaze konke ngaphakathi the bombo of the Earth …. !
In ukuvala lesi sihloko, ngaqaphela kumabonakude ukuthi horror kwaba namanje hit emikhayeni eminingi yase-ngamabhomu e Belgium.
Ngibeka ubufakazi lapha ukudabuka kwami ​​okujulile futhi simema bonke abafowethu kanye nodade abathandekayo kuKristu ukuba bathandazele lona kanye Izisulu nemindeni yabo.
Ningabalaleli ukuzonda kodwa ukuthi laba izenzo ezinengekayo ukwenza siqonde ukuthi amaphekula afeze ekuhlatshweni yabo egameni uNkulunkulu bezivakashele Allah!
Islam inkolo Lucifer kusukela buqala Islamists ngikhulume ngokukhululeka ngokukhubazeka Love izikhali esandleni!
Futhi ukusho ukuthi uPapa zigcinwe ukuthi zonke izinkolo ziyiqiniso futhi nazo imikhondo uNkulunkulu!
Ungakhohlwa nakancane ukuthi uJesu Kristu wathi :
« Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami! «